ဓမ္မစေတီ ချာချာလည် | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ဓမ္မစေတီ ချာချာလည်	Posted by mm thinker on August 13, 2014
Posted in: History.	Tagged: History.	Leaveacomment
← တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ရွေးချယ်ရေးမှာ ဘာတွေ ဦးစားပေးကြမလဲ	ပညာသင်ဆုလား၊ ခြေချုပ်မိစေတာလား →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...